लघुकथा : तथास्तु - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← तीन बिम्बहरु
कथा : विघटित सपना →
लघुकथा : तथास्तु
रातको बाह्र बजेको थियो । कोठामा म थिए स्वास्नी थिई ।बिरामी र सोचिरहेको थिए अप्रेसनका लागि जुटाउनु पर्ने पाच लाख रुपिया कहाबाट ल्याउने ।एकाएक प्रकट भए भगवान् कोठामा । झस्किए । के भयो । के यो सत्य त हो । चिमोटे आफैलाई । रहेनछ यो कुनै सपना वा भ्रान्ति ।मुस्कुराउदै भने भगवानले, “ए । मनुवा के माग्छस् माग् ।”
“यो अप्रत्याशित क्षणमा म के मागूँ ”
“छिटो माग् ।” भने भगवानले ।
हड्बडिएँ शायद । के माग्ने ? बिल्डिङ, गाडी, पैसा ? सोचेँ “माग्छु पैसा ।” चाहिएको छ अप्रेसनका लागि, सुखी जीवनका लागि । तर कति माग्ने – दश लाख, पचास लाख, एक करोड, दश करोड –
“छिटो माग् समय सकिन लाग्यो ।” भगवान्ले घडी हेर्दै भने । एकै सासमा भने, “दश करोड रूपियाँ दिनुस् प्रभु ।” “तथास्तु ।” भगवान् बिलाए । एकाएक थुप्रिए करोडका नोटहरू । खुशीले उफ्रिएँ र उठाउन खोजेँ स्वास्नीलाई । क छोएको थिएँ स्वास्नीलाई, चिसो भइसकेकी थिई। नाडी छामे थिएन नाडी । थियो स्वास्नीको लास एकातिर । अर्कोतिर नोटका बिटाहरू थिए अनि थिए म बीचमा अवाक् ।
चिच्याएँ “प्रभु । मलाई स्वास्नीको जीवन दिनोस् ।” तर थिएनन् भगवान त्यहाँ ।
This entry was posted in लघुकथा and tagged Ashesh Malla. Bookmark the permalink.